Faritra Boeny: natomboka tany Soalala ny fametrahana ny Dinan’I Boeny Miray Dia | Région Boeny
Napetraka tamin’ny fomba ofisialy tany amin’ny distrikan’i Soalala tao amin’ny tranom-pokonolona ny bokin’ny Dinan’i Boeny Miray Dia ny alakamisy 20 oktobra 2016.
Ity boky ity dia mbola vaovao amin’ny be sy ny maro, nisy ny fanazavana an’izany isaky ny andininy tamin’ireo fokonolona. Ary mba hampazava azy bebe kokoa, dia nametraka fiaraha-miasa amin’ny haino aman-jery sy amin’ireo solotenam-panjakana eto an-toerana ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar.
Marihina fa efa an-taona maro izay no nisian’ny komity mpanatanteraka ny dina tany Soalala. Azo lazaina ho komity tsy mbola ara-dalàna nefa niasa ihany izy ireo nohon’ny tsy fandriampahalemana teto an-toerana. Manomboka izao, averina indray ny fananganana ny komitin’ny dina vaovao ity manerana ny fokontany, ny kaominina sy ny distrika ary miasa avy hatrany.
Bokin’ny dina miisa 65 no nozaraina tamin’ireo Sefo fokontany rehetra tato anatin’ny distrikan’i Soalala sy ireo Ben’ny tanàna. Nametrahana ihany koa ny fiaraha-miasa eo amin’ireo samy tompon’andraikitra na eo anivon’ny fokontany na eo anivon’ny kaominina na eo anivon’ny distrika.
Ny disitrikan’i Mitsinjo indray no hametrahana ny dina, manaraka azy i Mahajanga II ary any Marovoay no hamaranana azy.
Nomarihin’ny Lehiben’ny Faritra fa amin’ny maha an’ny faritra Boeny ny distrikan’Ambatoboeny dia tsy maintsy hametrahana ny dina ihany koa ao an-toerana. Hisy ny fangatahana ny didy fankatoavana fampiharana azy io any amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany any Maevatanana, araka izany.
Niara-dia tamin’ny Lehiben’ny Faritra Boeny, nampahafantatra sy nametraka ity Dinan’ny Boeny Miray Dia ity ny Préfet an’i Mahajanga, Atoa Ravelomahay Lahinirina Fitiavana, notron’ny solotenan’ny Talem-paritry ny Tontolo iainana, ny solotenan’ny Talem-paritry ny filaminam-bahoaka, ny solotenan’nyKomandin’ny Zandary eto Mahajanga sy ny komandin’ny Faritany miaramila RM4.